Submitted by zwintun on Thu, 02/18/2016 - 13:51
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ ကြီးမှူး၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများကို ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ Information Technology Passport Examination (IT Passport) စာမေးပွဲသည် IT ဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတရှိပြီး IT နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများအတွက် လည်းကောင်း၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) စာမေးပွဲသည် IT ဗဟုသုတ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးသူများ၊ Programmer များ၊ Program Design ရေးဆွဲသူများနှင့် Software Development လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ် ရရှိစေမည့် စာမေးပွဲအသီးသီး ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲများသို့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များနှင့် IT စိတ်ပါဝင်စားသည့်မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ဖြေဆို နိုင်သည်။ စာမေးပွဲ အမျိုးအစား Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Information Technology Passport Examination (IT Passport) စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ ၂၄-၄-၂၀၁၆ (တနင်္ဂနွေနေ့) ၂၄-၄-၂၀၁၆ (တနင်္ဂနွေနေ့) စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်အချိန် နံနက် (၉-၃၀ မှ ၁၂-၀၀) ထိ နေ့လည် (၁-၃၀ မှ ၄-၀၀) ထိ နံနက် (၉-၃၀ မှ ၁၂-၁၅) ထိ စာမေးပွဲကြေး (၃၀,၀၀၀) ကျပ် (၂၀,၀၀၀) ကျပ် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေရာ MICT Park MICT Park MCPA Member များ ၅၀ % Discount ရရှိပါမည်။ စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF)၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ် (MICT Park)၊ ဖုန်း - ၆၅၂၃၀၇၊ ၀၉ ၇၃၂၅၇၃၇၇ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA)၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ (MICT Park)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉၇၃၀၈၈၃၀၀ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ (၉-၄-၂၀၁၆) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ ITPEC (FE) Exam Preparation သင်တန်းဖွင့်မည်။
Submitted by zwintun on Thu, 02/18/2016 - 13:40
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ ITPEC (FE) Exam Preparation သင်တန်းဖွင့်မည်။
Certification in IT Project Management Training to Trainers
Submitted by zwintun on Sat, 02/06/2016 - 15:09
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် Singapore Computer Society (SCS) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပမည့် Certification in IT Project Management Exam အတွက် Training to Trainers သင်တန်းကို 1-2-2016 ရက်နေ့မှ 5-2-2016 ရက်နေ့အထိ Kanaung Hub တွင် COMAT မှ ဆရာမ (၁) ဦး လာရောက်ပြီး နံနက် (၉းဝဝ) နာရီမှ ညနေ (၅းဝဝ) နာရီအထိ (၅) ရက်တိုင်တိုင် သင်ကြား ပို့ချခဲ့ပါသည်။
Read more about Certification in IT Project Management Training to Trainers
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (YRCPA) ၏ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများ တွင် နည်းပညာ ဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့
Submitted by zwintun on Sat, 01/23/2016 - 12:51
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (YRCPA) ၏ ပညာရေးကော်မတီမှ ကြီးမှူး၍ Visa Inc., ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် တိုးတက်လာသော ICT နည်းပညာရပ်များအကြောင်း သိရှိနားလည် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ MCPA ICT နည်းပညာ ပညာပေး ဟောပြောပွဲကို(၁၁-၁-၂၀၁၆ မှ ၁၄-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်နှင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင်များ ရှိ အ.ထ.က သုဝဏ္ဏ၊ အ.ထ.က (၂) ပုဇွန်တောင်၊ အ.ထ.က (၃) ကြည့်မြင်တို င်၊ အ.ထ.က (၁) သန်လျင်၊ အ.ထ.က (၁) အင်းစိန် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများသို့ ICT နည်းပညာကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချခြင်း၊ ထိထိမိမိ အသုံးချခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ၊ ICT နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ၊ လူငယ်နှင့်ပညာရေးခရီးစဉ် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အလုပ်အမှုဆောင်များက အသီးသီး ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (YRCPA) ၏ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများ တွင် နည်းပညာ ဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့
“VMware Certified Associate (VCA) Official Training” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Fri, 01/15/2016 - 12:39
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ Virtualization နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာအိုင်တီ လူငယ်များနှင့် MCPA Member များအတွက် VMware Certified Associate (VCA) Official Training သင်တန်းကို၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်မှ (၇) ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည််ဖြစ်သည်။ ခောတ်စနစ်ပြောင်းလဲလာမှု အခြေအနေအရ မြန်မာနိူင်ငံအတွင်း Virtualization နညး်ပညာတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး MCPA နှင့် VMware Inc အသိအမှတ်ပြု ကိုဘိုဘိုဇင် (Senior Solution Architect, VMware vExpert 2013-14-15, VMware-Myanmar) တို့မှ Virtualization နည်းပညာနယ်ပယ်အတွင်း VCA Certified တစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ရပ်တည်ခိုင်မာမှု အတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိ Virtualization နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ Data Center နှင့် Cloud Environment အကြောင်းသိလိုသူများ၊ Certified Professional တစ်ယောက်အနေဖြင့် ရပ်တည်လိုပါက မိမိကိုယ်တိုင် Virtualization နည်းပညာရပ်များအား လေ့လာထားသင့်ပါသည်။ သင်တန်းအား VMware Inc အသိအမှတ်ပြု VCE Certified Trainer မှ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည့် Official Training အား တက်ရောက်စေနိုင်ခြင်းအပြင် Virtualization နည်းပညာသင်တန်းအား နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သွားရောက်တက်ရောက်မည်ဆိုပါက ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိခြင်း သင်တန်းစျေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း ခရီးစရိတ်များပြားခြင်း စသောအခက်အခဲများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Content Overview - VMware Certified Associate Certifications 1) Introducing the VMware Certified Associate (VCA) 2) VMware Certified Associate (VCA) – Cloud Overview 3) VMware Certified Associate (VCA) – Workforce Mobility 4) VMware Certified Associate (VCA) – Data Center Virtualization 5) Who Should BecomeaVMware Certified Associate? 6) Why BecomeaVMware Certified Associate? 7) How to BecomeaVMware Certified Associate 8) Preparing for the VCA in Data Center Virtualization Certification 9) Introduction to VMware Data Center Virtualization 10) How VMware Data Center Virtualization Helps You 11) What Makes Up the Modern VMware Infrastructure? 12) Understanding VMware vSphere 13) Understanding VMware vSphere Storage 14) Understanding VMware vSphere Networking 15) Solving Availability Challenges With vSphere 16) Solving Management Challenges With vSphere 17) Solving Optimization Challenges With vSphere 18) Solving Scalability Challenges With vSphere 19) Comparing SMB and Enterprise Data Center Challenges သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက် မှ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ) သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၀၉းဝ၀ နာရီ မှ ညနေ ၆းဝ၀ နာရီအထိ သင်တန်းကြေး - ၂၅၀,၀၀၀ိ/ (နှစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်တိတိ) MCPA Member (30%) - ၁၇၅,၀၀၀ (တစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်) သင်တန်းသားဦးရေ - (၅၀) ဦး သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၁၄)၊ (၃) လွှာ၊ MCPA ICT Lab (2) ၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက် နေ့လည် (၂) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ် ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃ဝဝသို့ စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Read more about “VMware Certified Associate (VCA) Official Training” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Fri, 01/01/2016 - 12:58
မင်္ဂလာရှိသော 2016 နှစ်သစ်ကူးမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ဥက္ကဋ္ဌ နှင်. တကွ အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် အသင်း များမှ ကွန်ပျူတာပညာရှင် များ ၊ အသင်းဝင် အသင်းသား များမှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး၊ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး၊ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ကင်းဝေးကြပါစေ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ၊ ကောင်းကျိူးလိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝကြပါစေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအောင်မြင် တိုးတက်ပါစေလို.ဆုတောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ် MCPA ဲInformation Committee
MCPA Certified Network Exam စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်
Submitted by zwintun on Fri, 01/01/2016 - 12:55
Read more about MCPA Certified Network Exam စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်
MCPA အသင်းသားများသို့ အသိပေးကြေငြာခြင်း
Submitted by zwintun on Wed, 12/30/2015 - 15:27
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA)တွင် Student Member, Associate Member, Professionals Member များအဖြစ် အသင်းဝင်ရောက်ထားကြသူများအနေဖြင့် MCPA ၏ Activity များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ MCPA အသင်းဝင်များအားလုံးမှ မိမိတို့၏ လက်ရှိ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများ ကို MCPA ရုံးအဖွဲ့၊ MCPA ရုံးခန်း အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park ၊ ဖုန်း − ၀၁−၆၅၂၂၇၆ ၊ ၀၉− ၇၃၀၈၈၃၀၀၊ email address – office@mcpamyanmar.org သို့ ပေးပို့ပေးပါရန် အကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များအချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုရရှိစေရန်နှင့် အသင်းလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများကို အသင်းသားများပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍ MCPA Facebook စာမျက်နှာ တွင် လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါကြောင်းကိုလည်း လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ MCPA Member များအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ တဆင့် ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် အကြောင်းကြားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Read more about MCPA အသင်းသားများသို့ အသိပေးကြေငြာခြင်း
“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Wed, 12/30/2015 - 15:25
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ Networking နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Wireless Network Essentials Course (WNE) အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည််ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ Company များ၊ NGO များ၌ အလုပ်လုပ်နေသော Network Engineer များ၊ IT Officer များ၊ Wireless ISP လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ Wireless အကြောင်းလေ့လာနေသူများ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အထူးတက်ရောက်သင့်ပါသည်။ သင်တန်း၌ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်ဦးဇော်ဝင်းထွန်း မှ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများ… v Wireless Local Area Network and Smart WLAN Configuration v Cisco Wireless Controller and APs v Ad-host,WLAN (Point to Point, Point to Multipoint, Repeater) v Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium ( Short and Long ) v Unifi WiFi Controller Device and Access Point CPE v VLAN Switch (Layer 2) Configuration for WiFi v Mikrotik Cloud Core Router Management v Wireless IP Camera Configuration v Pfsense Hotspot v Firewall VPN Network v Storage Management (Synology) v VOIP Gateway and IP Soft Phones… အစရှိသည်တို့ကိုစာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားလေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၅) ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ) သင်တန်းအချိန် - နေ့လည် ၀၁းဝ၀ နာရီ မှ ၄းဝ၀ နာရီအထိ သင်တန်းကြေး - ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်) MCPA Member (50%) - ၇၅,၀၀၀ (ခုနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်) သင်တန်းသားဦးရေ - (၁၅) ဦး သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊ လှိုင်မြို့နယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about “Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
MCPA Certified Network Exam DEC စာမေးပွဲများကို ၂၀-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့
Submitted by zwintun on Mon, 12/21/2015 - 11:26
MCPA Certified Network Exam စာမေးပွဲကို ၂၀-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း တို့တွင် တစ်ပြိုင်နက် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ စုစုပေါင်း Network Associate Exam တွင် (၄၁) ယောက်နှင့် Network Professional Exam တွင် (၂၂) ယောက် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။
Read more about MCPA Certified Network Exam DEC စာမေးပွဲများကို ၂၀-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့